Izezimali zedijithali ezithembisayo kakhulu ngo-2021. Izimali zedijithali ezizuzisa kakhulu ukutshalwa imali, izimali zedijithali ezanda ngokushesha ukuthenga manje.
Izezimali eziyi-10 eziphezulu kakhulu ezithembisayo zedijithali, ezikhule ngenani elikhulu ngenyanga eyedlule.
Izimali zedijithali ezinenzuzo kakhulu
Ukukhula kwamaphesenti kwenyanga
NuCypher (NU) 351.85 %
SHIBA INU (SHIB) 304.45 %
WOO Network (WOO) 170.01 %
Axie Infinity (AXS) 122.81 %
Stacks (STACKS) 85.18 %
Livepeer (LPT) 68.15 %
Reef (REEF) 62.34 %
COTI (COTI) 53.90 %
Badger DAO (BADGER) 53.76 %
NKN (NKN) 53.37 %
Imali ethembisa kakhulu i-idijithali yemali yinsizakalo yewebhusayithi ye-ptptoratesxe.com ekhombisa ama-izimali zeDividenti aphezulu ngenzuzo ephezulu ezinyangeni ezi-3 ezedlule.
Insizakalo eku-inthanethi Iningi lentengo yedijithali ethembisayo isebenzisa imithombo evulekile evela ekushintshanisweni kwe-idijithali yemali futhi ihlanganisa isilinganiso sokuthembisa ama-izimali zeDividenti ngokuya ngokutshala imali yesikhathi sangempela.
I-idijithali yemali ethembisayo ibhekwa kanjalo uma ikhombisa ukukhula okuzinzile nokuhlala njalo kusilinganiso. Ngokusekelwe kumandla wokukhula, ukuzinza kokukhula kwalo nosayizi wenzuzo etholwayo ngokutshala imali ye-crypto, sihlanganisa lesi silinganiso se-TOP.
Ama-izimali zeDividenti athembisayo kakhulu 2021
Ama-cryptocurrensets athembisayo kakhulu we 2021 insiza yethu yewebhusayithi yamahhala ekhombisa ama-cryptocurrensets athembisayo kakhulu 2021.
Ukukhetha okukhethiwe kwe-crypto kuhamba 2021, kepha sihlola izinyanga ezi-3 zokugcina zamazinga wokushintshanisa. Izinga lokushintshaniswa namandla esilinganiso esishintsha nsuku zonke ngakhoke isilinganiso sethu esiphezulu "Iningi lentengo yedijithali ethembisayo 2021" ingashintsha nsuku zonke.
I-izimali zeDividenti ekhulayo enenzuzo ephezulu.
I-izimali zeDividenti ekhulayo enenzuzo ephezulu - isampula lawo wonke ama-izimali zeDividenti ngokuya ngamandla awo. Ama-izimali zeDividenti akhulayo enenzuzo ephezulu ayahlaziywa yithi ukuhlanganisa amazinga aphezulu ama-cryptocurrensets athembisayo.
Sinquma inzuzo ye-crypto ngesikhathi: ushintsho lwesilinganiso sabo ezinyangeni ezintathu ezedlule.
Inzuzo ephezulu ye-idijithali yemali imane inqunywe - ukuthi ingakanani i-idijithali yemali ngayinye ekhuphukile ngentengo esikhathini sokuhlaziywa.
Ama-izimali zeDividenti anenzuzo kakhulu yisevisi yethu, isilinganiso esiphezulu se-inthanethi sama-cryptocurrensets abaletha inzuzo ephezulu uma uwathenga futhi uwathengisa ngemuva kwesikhathi esithile, isb. Inzuzo kakhulu.
Ingxenye ephezulu kakhulu ye-crypto enenzuzo ibalwa ezinyangeni ezi-3, kepha ungazihlaziya ngesinye isikhathi.
I-crypto enenzuzo ibhekwa maqondana nedola laseMelika. Sicabanga ukuthi sathenga i-crypto ngedola laseMelika, kwathi ngemuva kwesikhashana sayithengisa ngamadola. Yikuphi i-idijithali yemali ezothola imali ephezulu kuleli cala yimali enenzuzo kakhulu kunazo zonke.
Ithebula le-cryptocurrensets enenzuzo kakhulu.
Ithebula le-cryptocurrensets enenzuzo kakhulu - kuboniswa ngokulinganisa isilinganiso sethu esiphezulu se-crypto enenzuzo kakhulu.
Etafuleni le-crypto elinenzuzo kakhulu ungabona igama le-idijithali yemali kanye nezinga lokukhula kwalo ngamaphesenti ngenyanga.
Uma uchofoza enye yama-izimali zeDividenti anenzuzo kakhulu etafuleni, uzobona ukukhuphuka okuningiliziwe kwesilinganiso salesi sikhathi senyanga edlule.
Ishadi lama-cryptocurrensets anenzuzo kakhulu.
Ishadi elinenzuzo kakhulu le-idijithali yemali kungenye ithuluzi lamahhala eliku-inthanethi elibonisa amazinga aphezulu kakhulu we-izimali zeDividenti.
Ishadi lama-cryptocurrensets anenzuzo kakhulu libonisa amandla wentengo yama-cryptos aphezulu ayi-10.
Ukuze ubone kalula, ihluzo zama-cryptos ahlukene zivezwa ngemibala ehlukene.